Iingxaki zoKhenketho kunye noBuyiselo kwiNdawo yokuFikela: Incwadi entsha ekufuneka ifundwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iingxaki zoKhenketho kunye noBuyiselo kwiNdawo yokuFikela: Incwadi entsha ekufuneka ifundwe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
by UDavid Beirman
Incwadi entsha ekufuneka ifundwe
Ibhalwe ngu UDavid Beirman
Kufanelekile ukuba incwadi egubungela yonke imiba yeentlekele kunye neemeko ezimbi ezichaphazela ukhenketho ikhutshwe ngeHalloween. Nangona kunjalo, njengoko ukhenketho luqala ukuchacha kwakhona kwi-COVID-19, oku kugxile kwizinto ezingamawele zomngcipheko, ubungozi kunye nethuba.
Njengombhali wale ncwadi ayifanelekanga ukuba ndenze izigqibo malunga nomgangatho wale ncwadi.
Eso sigwebo sigcinelwe abafundi okanye abagxeki. Nangona kunjalo, ndingakuxelela kancinci ngale ncwadi kunye nokufaneleka kwayo kwishishini lokuhamba.
Ngokwenyani, le ncwadi igubungela umxholo weendidi eziphambili zomngcipheko kunye neentlekele ezinefuthe kushishino lokhenketho.
Ukusuka apho, ndixoxa ngezicwangciso-qhinga ezisetyenziswa yimibutho yolawulo lwendawo yokufikela kunye namashishini okhenketho ukuthintela ukuba zenzeke okanye ukuphendula kuwo xa sele ebethe.
Iindidi zentlekele ezichazwe kule ncwadi zezi:
Covid-19 Esona sahluko side encwadini
Iingxaki zezempilo kunye nobhubhane, ngaphambi kwe-COVID-19
Ukusilela kolawulo kunye neNkonzo (iinjongo zakho)
Imingcipheko yokusingqongileyo kunye neeNgxaki
Ishishini ngalinye lezokhenketho linokunxulumana nomnye wale mixholo kwaye sonke sinokufunda okuninzi kwindlela iindawo zokhenketho kunye namashishini aphendule ngayo kule mingeni.
Ukongeza kule mixholo ingasentla izahluko ezibini zentshayelelo zijolise ekuchazeni umngcipheko, ingxaki kunye nokomelela kunye norhulumente, imibutho yokhenketho yehlabathi kunye neendlela zecandelo lezokhenketho kumngcipheko wokhenketho, ingxaki kunye nokuchacha.
Imixholo iboniswa ngamaphononongo angaphezulu kwama-20 (2-4 kwisahluko ngasinye) avela kwihlabathi liphela. Njengoko ndiyibhalile incwadi njengencwadi yokufunda kukho imibuzo yengxoxo ekupheleni kwesahluko ngasinye. Ngelixa iqhutyelwa kubafundi baseyunivesithi ndenze konke okusemandleni am ukuqinisekisa ukuba iqondakala lula kubo bonke abafundi ingakumbi kwiingcali zokhenketho. Nangona kunjalo, ukuyifunda ngexesha lokulala akunjalo. Ndiye ndazama ukuthatha imbonakalo yehlabathi kwaye apho kunokwenzeka khona, ndibandakanye ezinye zeengxaki kunye neenkqubo zokubuyisela apho ndibe ngumthathi-nxaxheba ngokuthe ngqo.
Le ncwadi yincwadi yokuqala enesihloko esingomngcipheko wokhenketho, ingxaki kunye nokuchacha ukusukela kumsebenzi ka-Joan Henderson ka-2007, Iingxaki zoKhenketho, oonobangela, iZiphumo kunye noLawulo. Incwadi kaNjingalwazi Henderson yayikrelekrele kwaye yandikhuthaza. Nangona kunjalo, ndiqinisekile ukuba angavuma, kuninzi okwenzekileyo kukhenketho ukusukela ngo-2007 kunye ne-COVID-19, endiyigubungela kakhulu, yeyona ngxaki inkulu kunye nomceli mngeni, iingcali zokhenketho kunye nabafundisi abakhe banamava kubomi bethu.
Bona iinkcukacha apha. Incwadi ipapashwe yiSage Publishing (eLondon) kwaye iya kufumaneka kwihlabathi jikelele ukususela nge-30 ka-Okthobha (umhla ofanelekileyo wokukhutshwa kweHalloween). Ndiyathemba ukuba uya kuyonwabela le ncwadi kodwa ungabi nazintloni ukundixelela ukuba awuyifuni kwaye kutheni. Ndisebenza kwenye incwadi ngoko ke iingcebiso ezakhayo zisoloko zamkelekile.